ယူနိုက်တက် ကို အရှက်တွေပေးပြီး အဆင့် ၁ ယူလိုက်တဲ့ လီဗာပူး ၊ ဗိုလ်လုပွဲ တက်သွားတဲ့ အင်တာ ၊ ဖူလ်ဟမ် တို့ တန်းပြန်တက်လာမှုနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ယူနိုက်တက် ကို အရှက်တွေပေးပြီး အဆင့် ၁ ယူလိုက်တဲ့ လီဗာပူး ၊ ဗိုလ်လုပွဲ တက်သွားတဲ့ အင်တာ ၊ ဖူလ်ဟမ် တို့ တန်းပြန်တက်လာမှုနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲကျန် မှာတော့ လီဗာပူး ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို အိမ်ကွင်း အန်ဖီးလ် မှာ ၄ ဂိုးပြတ် အနိုင် ကစားပြီး အဆင့် ၁ နေရာကို တက်လှမ်း သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဟာ လီဗာပူး ကို ဘယ်လိုမှ ယှဉ်မကစား နိုင်ဘဲ ပြည်တွင်းရဲ့ အကြီးမားဆုံး ပြိုင်ဘက် နဲ့ အဆင့်ချင်း များစွာ ကွာဟနေပြီ ဆိုတာကို နောက်တခါ သိသာ မြင်သာ စေခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး ဟာ အိုးထရက်ဖိုဒ့် မှာတုန်းကလည်း ယူနိုက်တက် ကို ၅-၀ နဲ့ အနိုင် ကစားခဲ့ပြီး အခုပွဲရလဒ်ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို တရာသီ အတွင်း ၉ ဂိုး သွင်းနိုင်တဲ့ ပထမဆုံးသော အသင်း ဖြစ်လာစေခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး အတွက် မိုဟာမက် ဆာလာ က ၂ ဂိုး သွင်းပေးခဲ့ပြီး ရွှေဖိနပ်ဆု အတွက် ပိုမို အားကောင်း စေခဲ့ပါတယ် ။ ကျန်ဂိုးတွေ ကိုတော့ မာနေး နဲ့ လူးဝစ် ဒီယာ့စ် တို့က သွင်းယူခဲ့ပြီး သူတို့ အကြားမှာလည်း အချင်းချင်း ပြန်လည် ဖန်တီးပေးမှုတွေ ရှိခဲ့ကြပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ကတော့ ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်မှုကြောင့် အဆင့် ၆ နေရာကို ဆင်းသွားခဲ့ရပြီး အာဆင်နယ် ဟာ ပွဲမကစားရဘဲ ဂိုးကွာခြားချက် အသာရမှု နဲ့ အဆင့် ၅ နေရာကို ပြန်လည် ရောက်ရှိ သွားခဲ့ပါတယ် ။
ဒီပွဲမှာ ၂ ဘက် အသင်းသားတွေဟာ ရင်သွေးငယ်လေး မီးဖွားချိန်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း အထိမ်းအမှတ် ကို ပြသခဲ့ပြီး ပွဲချိန် ၇ မိနစ်မှာ အန်ဖီးလ် ကွင်းထဲက ပရိသတ်တွေဟာ ရိုနယ်ဒို အတွက် ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဘာ ဟာ ပွဲအစ ၁၀ မိနစ်မှာတင် ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး လူစားလဲ ခဲ့ရကာ လာမယ့် အာဆင်နယ် ၊ ချဲလ်ဆီး နဲ့ ပွဲတွေကို ပါဝင်ဖို့ မသေချာဘူး လို့ နည်းပြ ရန်းနစ် က ပွဲအပြီးမှာ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် နဲ့ ချန်ပီယံရှစ် ကို တက်လိုက်ဆင်းလိုက် လုပ်နေတဲ့ ဖူလ်ဟမ် အသင်းကတော့ မနေ့ညက ပွဲစဉ် အပြီးမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် တန်းတက်ခွင့် ကို ရယူ သွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဖူလ်ဟမ် ဟာ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီကစပြီး အခုရာသီ အထိ ၅ ရာသီ အတွင်းမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် နဲ့ ချန်ပီယံရှစ် ကို တရာသီစီ တက်လိုက်ဆင်းလိုက် ကစားနေတဲ့ အသင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
တန်းတက် အပြီးမှာပဲ ဖူလ်ဟမ် ဟာ လာမယ့် ရာသီ အတွက် ပြင်ဆင်မှု အဖြစ် ရှက်တာ ဒိုးနက် အသင်းရဲ့ ကစားသမား မာနော် ဆော်လမွန် ကို ယူရို ၇.၅ သန်း + ရောင်းချ အကျိုးခံစားခွင့် ၁၅% တို့နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှု ရယူ နိုင်ခဲ့ပြီလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဒိန်းမတ် ကွင်းလယ်လူ ခရစ်ရှန် အဲရစ်ဆင် ရဲ့ အေးဂျင့် ဟာ အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေ နဲ့ ရာသီမကုန်ခင်မှာ တွေ့ဆုံပြီး ကစားသမား ရဲ့ အနာဂါတ် ကို ဆွေးနွေး သွားမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
စပါး က အဲရစ်ဆင် ကို ပြန်ခေါ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားနေပေမယ့် ကမ်းလှမ်းမှု မပြုလုပ် ထားပါဘူး ။ အဲရစ်ဆင် ကလည်း ဘရန့်ဖိုဒ့် နဲ့ စာချုပ် ဆက်ချုပ်ဖို့ မသေချာဘဲ အသင်း တသင်းကို ပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးနေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် အသင်းဟာ အာဆင်နယ် ရဲ့ ပြင်သစ် နောက်ခံလူ ဝီလ်ယံ ဆလီဘာ ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ ကိုပါ အီတလီယာ ဖလား ဆီမီး ဖိုင်နယ် အဆင့် မှာတော့ အင်တာမီလန် ဟာ အေစီမီလန် ကို ၃-၀ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး ဗိုလ်လုပွဲ ကို တက်လှမ်း သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ အင်တာ အတွက် တိုက်စစ်မှူး မာတီနက် က ၂ ဂိုး ၊ ရိုဘင် ဂေါ့ဆန် က ၁ ဂိုး သွင်းယူ ပေးခဲ့ကြပါတယ် ။
PSG ဟာ နွေရာသီမှာ ကစားသမား အများအပြား ကို ရောင်းထုတ် သွားဖို့ စိတ်ကူး ထားပြီး မက်ဆီ အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ အာဂျင်တီးနား အသင်းဖော် အားလုံး ( ဒီမာရီယာ ၊ အီကာဒီ ၊ ပါရီဒက်စ် ) ကို ဆုံးရှုံး ရနိုင်ချေ ရှိတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
အိုက်စလန် အမျိုးသမီး အသင်းခေါင်းဆောင် ဟာ လာမယ့် အမျိုးသမီး ယူရို ၂၀၂၂ ပြိုင်ပွဲမှာ သူတို့ အသင်း ကစားမယ့် ပွဲစဉ်တွေ အတွက် ပရိသတ် ၇၀၀၀ သာ ဝင်ဆံ့ တဲ့ မန်စီးတီး အကယ်ဒမီရဲ့ ဘောလုံးကွင်း ကို စီစဉ်ပေးမှု အပေါ် စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်ပြီး ဝေဖန် ပြောဆို ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ကွင်းလယ်လူ ကိုဗာဆစ် ဟာ ခြေကျင်းဝတ် ဒဏ်ရာကြောင့် ၂ ပတ်ခန့် အနည်းဆုံး နားရနိုင်တယ် လို့ နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ် က ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နောက်ခံလူ အန်တိုနီယို ရူဒီဂါ ဟာ သူ့ရဲ့ အနာဂါတ် ကို လာမယ့် ၂ ပတ် အတွင်းမှာ အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သွားဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။
Previous Article မဟာပြိုင်ဘက်ကို ဂိုးပြတ်ချေမှုန်းကာ အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ကို တက်လာခဲ့တဲ့…လီဗာပူး ၄-၀ မန်ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ်မှ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာများ
Next Article မန်ယူနိုက်တက်ကို နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး အခိုက်အတန့် ၊ တီယာဂိုကို လူစားလဲမှု နဲ့ လီဗာပူးရဲ့ performance ကို အကဲဖြတ်လိုက်တဲ့ ကလော့